09.04.2016 comments (0)
Puntland sidee wax noqdeen? Damaanad cidna ugama baahnin!
Waxaan hubaa dad-weynaha reer Puntland inaysan waziirka arrimaha dibadda Itoobiya Tedros Adhanom iyo dal kale oo shisheeye ahba uga baahnayn damaanad qaad, oo yuu damiin iiga noqon?! War bal nimanyahow, hadda bur-cadnimadaas intay la'egtahay arka!
Beentii horaba tan baa ka liidata!.... sida loo qoray heshiiska beenta ee Xasan SHiikh Max’uud Saaxiibadiis Cabdi-Wali Maxamed Cali Gaas iyo Caumar Cabdi-Rashiid C. SHar-Ma-Arke ku wada saxiixdeen magaallada Garowe. Waxaan maqli jiray Deriskaa mar ku diin, marna ku dayo, marna ka darnow! Mase arkaysay guddoomiyaha barlamanka Puntland Axmed Cali Xaashi oo inta tie soo xirtay sidii Jawaari arrin aan waxba laga weydiin iska saxiixaya! Maxayse kula tahay aamusnaanta barlamanka Puntland oo aan ilaa iyo hadda mar keliya aan ka hadlin wixii meesha lagu qortay oo ay ogyihiin inuu ahaa af-duub lagu sameeyay shacabka ay sheeganayaan inay wakiilka u yihiin?! …..Gaas 4.5 uu idin saxiixay waa habka ay kuwaas ku yimaadeen, wuxuuna u haystaa kursi tolkii leeyihiin inuu yahay kursiga, ma waxaan eedeynaa odayaashii inoo soo xulay mise iyaga?!....ma waxaan eedeynaa shacabka qof kasta uu ku tumanayo oo kaalintooda gabay mise iyaga?! Sidee bay wax noqdeen? Ayaa waxa dhacay eedooda qaadaya?!
Waxaynu yeelnay laynaguma qasbin, waan ognahay Max’ed Cusmaaan Jawaari iyo midaan dhaamin oo la mid ah baa imaanaya, hadda Jawaari yuu wakiil u yahay?! Waa qofna, waayo waxaad ka garanaysaa sida uu u dhaqmay, 4 sano oo kaamil ah baa Xasan dastuurkii dalka ku tumanayay oo uu marar lahaa anigaa sharci ah oo ma aqoonsani wax qaynuun ah ama sharci ah oo iga horeeyay aniga, bal adiga aan ka weydiiyee maalin keliya oo uu xukuumadda ama siyaasdaha guracan ee dalka iyo dadka iyo diintaba ka soo hor jeeda oo uu Xasan SHiikh Max’ud ku khilaafay ama kaga hor yimid afartaas sano sheeg?! Ma jirto, marka isgauu la shaqaysaniyay, bal hadda ka waran odaygii keenay ama soo xulay isaga iyo kuwa la midka ah ee maalin kasta u soo kalahaya inay ummadda Soomaaliyeed lug-gooyaan?! Meel kasta waa sidaas.
Axmed Cali Xaashi oday baa inoo keenay, kuwa Puntland ama dowladda federal-ka fadhiya mid kasta oday baa inoo keenay, ama Muqdisho ha ahaato, ama Garowe ha ahaato, 4.5 baa mid kasta inoo keentay!.... xataa xoogaa yar loo qaateen bay ahaan lahayd haddii odayaashii dadkaan qaraaba kiilka ku keenay ay meel ka dhacyada ka imaanaya mas’uul ka noqon karaan, laakiin iyagaa keenaya danbigay dalka iyo dadka ka gaalaanna ummadday ula simmanyihiin, macno aan fahmi karo ma aha!....waxaa fiicnaan lahayd inaysan qofna soo magacaabin haddii aysan dadka ka qaban karin! Reer Puntland dowladdii oo dhan baa been u sheegtay, Cabdi-Wali Max’ed Cali Gaas baa maalin kasta been u aqrinayay, ilaa uu gaarsiiyay caruurta in lagu seexiyo
[Madax-weynaha Puntland Cabdi-Wali M. Cali Gaas wuxuu kala garan waayay Jigjiga iyo Muqdisho, Tedros isagana been buu isu sheegay oo kuwii ka xoogga weynaa baa diiday inay damaanad baxshaan isaguse sidaasuu ku calwasaadayaa!]
“No 4.5”, Xil-dhibaannadii baa qoraalo ku taageeray oo iyagiina beentii oo kale meel kasta la soo istaagay! Laakiin maxay ku soo dhamaatay…Ileen Ceeb Looma DHinto! Dad-weynihii waxaa ku dhacay af-dhabaandhab, malaha awalba cid ay soo doorteen oo rabitaankkdii xilka ku yimid ma jireenee waxay filayeen odayaashii iany wax ka yiraahdaan waxa dhacay, waa la wada aamusay?! Oo waayo?! Bal adba?!....
Qaynuun ahaan xukuumadda Puntland iyo golaheeda shacabka waa ay dhaceen oo sharci ahaan ma jiraan, waa arrin khtar ah waxa Puntland ka socda, oo sharciyadii waxay ku soo urureen waraaqaha dushooda.Waxaa xusid mudan oo aan ahayn in la qariyo ama afka laga leexiyo habka iyo nidaamka barlamanka maamulka Somaliland inuu kaga dhowyahay maamul wanaagga iyo la xisaabtanka xukuumadda midka Puntland, taasna waxaad ka garanaysaa in gudoomiyihii barlamanka iyo ku-xigeenkiisa ay ku dirireen khilaaf la xiriira danta guud oo markaas lagaga doodayay golahaas oo khuseeyay in haamaha shidaalka lagui wareejiyo shirkado gaar ah….taas waxaa ka darnaa markii uu madax-weynaha Siilaanyo doorashada gudoomiyaha xizbiga Kulmiye oo Siilaanyo ka tirsanyahay markaasoo ay mar keliya is cazileen ilaa lix waziir, waxaad arkaysaa in xisaabtan uu jiro, oo hay’aduhu hayaan hawshii iyo adeegii dadkoodu ka sugayeen, laakiin xafiisyadii barlmanka iyo qolkii shirarka waxay noqdeen goobo fadhi ku-dirir ah ama qadada lagu sugo oo aan Puntland iyo Soomaaliya midna waxba ugu oolin.
Cudurka ugu weyn ee ii muuqda ee runtii dhibaatada ku ah maamulka Puntland khatar bandanna aayaha fog iyo midka dhowba ku ah waa iyada oo aan runta lagu wada hadli karin, qaynuun kasta iyo xeer kasta oo ummaddu dhigatayna aan la dhaqan gelin karin iyadoo laga baqayo ama lagu ixtiraamayo beel…..laakiin aan kaa qoslisiiyee markay dhiig iyo diyo tagto wax kasta oo la wadaagay laysku ixtiraami maayo! Waan dhaqan aad u fog oo laga weynaan la’yahay. Dowladnimmadii ummadda, maamulkii iyo wixii ay ummaddu nidaam lahayd nin baa ku tumanaya oo ku xad gudbaya qofna lama hadlayo oo beel baa lagu xaq dhowrayaa, laakiin ninkaas gaari uu leeyahay haddii uu waxar jiiro balaayaa dhacaysa!.....bal caqligaas adigu qiyaas!
[Max’ed Cusmaan Jawaari iyo xil-dhibaannada dhammaantood arrintooda waa la ogyahay oo waa DHicis Hooyadii Buu Ku Gowracanyahayee! Maxkamaddii sare aaway?!]
Cabdi-Wali Max’ed Cali Gaas, wax wanaagsan reer Puntland iyo Soomaali inteeda kale midna uma samayn, wuxuu ugu bareeray si aad moodo inuusan ka dhalan khaa’inimo iyo dhagar aysan jirin baahi u geysay oo ku qasabtay aan ahayn naf jeclaysi…..Wali ma ka dhab isagu oo ma waxuu isu haystaa inayan dadku fahmin inuu khayaanay, ma wuxuu u haystaa in ummaddu mar dambe wax ka rumaysanayso!....balse ka waran golaha xukuumadda?! Mase meeshaba waxaa loo joogaa maxaa iga galay hadaan mushaar qaadanayo, oo himmaddii dadnimmada iyo Alle ka cabsigii iyo qofnimadii dadku ma ka suushay! Qoraaladiisii u dambeeyay Aniis Al-Mansuur Alle ha u naxariistee maalmuhuu dhimanayay wax yar ka hor wuxuu Xusni Mubaarak ku yiri “Madax-weyne kafantu jeeb ma laha!”….
Waxaa danbi kale ah, gef iyo meel ka dhac ah, in Cabdi-Wali Max’ed Cali Gaas uu Itoobiya heshiis ay Soomaali wada gelayso damaannad u weydiiyo. Waxaa taas ka sii fool xun oo kahyaano qaran ah in Cumar Cabdi-Rashiid Cali SHar-Ma- Arke uu isagoo inoo sheeganaya inuu yahay ra’iisal wazaarihii Soomaaliya heshiis noocaas oo uu dal shisheeye damiin ka noqonayo maamul goboleed ka tirsan dowladda federal-ka Soomaaliya uu saxiixo, kaaga daranee ninkii madax-weynaha aahna waab ku hambalyeyay! Aaway nimankii xil-dhibaannada ahaa, ma inoo sheegi karaan sababta looga aamusay arrintaas…waa la cabsaday, mise wax kalaa jira?! Si kastaba ha ahaatee haddii aydan itaal hayn sow ma fiicnaateen inaad guryihiina iska aaddaan oo aydaan been inoo sheegin?!....Maxkammaddii-Sare iyadu maxay la aamustay?!......
Michael Keating, sida uu inoogu magacaabanyahay oo dalka uu ku joogo waa wakiilkii Xoghayaha Qarammada Midoobay Banki Moon, markii heshiiskaas foosha xun la saxiixayay waa uu diiday damaannadda beenta ah inuu qaado oo wuxuu qortay inuu yahay oo uu door biday inuu wax ku saxiixo Marqaatinimo, sidaasoo kalana dhammaan waa ay diideen xubnihii kale ee ka socday waxa Beesha Caalamka loogu yeero oo dhammaan waxay isku qoreen inay yihiin marqaati, waa hagaag bal hadda aan wax yar fiirino maxaa kuu soo uraya?!.... dadka waxaa loogu sheekeeyay waziirka arrimaha dibadda Itoobiya Tedros Adhanom inuu dalkiisu yahay gudoomiyaha xilligan ee urur goboleedka IGAD, sidaas daraadeedna uu isagu mudanyahay inuu noqdo Damaanad-Qaade ( Guarantor) Cajiib!!! Wallee Bidaari Sibiq Bay Kugu Gashaa! Xaggee baa lagu arkay meel Qarrammadii Midoobay ay damaannadii diidayso oo dal Itoobiya oo kale ah Soomaaliya Dammaanad dhexdeeda uga noqonayso?!......Dalkii Soomaaliyeed shacabkii baa
Gablamyiyay, in dhallin yaradii tahriibaan oo badaha ku dhintaan ama Al-SHabaab ka mid noqdaanna waxaa sabab u ah dalkii oo dowladnimmadii laga hor joogsaday dhallintii ay rajo iyo nolol ka weyday!...Soomaaliya shacabkeedaa daamannadda iska leh, iyagaana laga sugayaa.